Vaovao - Nahomby tamin'ny fahombiazana tamin'ny fandraisana andraikitra iraisam-pirenena momba ny fitantanana aliminioma (ASI) ho an'ny takelaka aluminium, coil aluminium, famokarana foil aluminium ary orinasam-pivarotana varotra
Nandalo tamim-pahombiazana ny fandraisana andraikitra iraisam-pirenena momba ny fitantanana aliminioma (ASI) ho an'ny takelaka aluminium, coil aluminium, famokarana foil aluminium ary orinasam-pivarotana varotra
Vao tsy ela akory izay, ny teknolojia alimina vaovao Zhejiang co., LTD dia nandalo tamin'ny fomba mahomby ny mari-pahaizana momba ny fitantanana aliminiam-pirenena (ASI) fanamarinana fenitra ho an'ny takelaka aluminium, coil aluminium, famokarana foil ary alim-pandraharahana amin'ny varotra. Izahay no laharana faha-96 manerantany ary ny laharana faha-10 any Sina ho fanamarinana ny ASI, ity dia manamarika ny New Aluminium Tech Co ltd mifanaraka amin'ny fanajana ny fampidirana fitaovana ASI sy ny fivoahan'ny siansa sy ny teknolojia fitantanana ny toe-javatra mifandraika ary afaka manome ny takelaka aluminium, ny coil ary ny aluminium. foil nomen'ny fanamarinana ny ASI
ASI (the Aluminium Management Initiative) dia fikambanana manerantany, mpandray anjara marobe, fananganana mari-pahaizana tsy miankina amin'ny fanjakana ary fanamarinana miaraka amin'ny vina hanamafisana ny fandraisan'anjaran'ny aluminium ho an'ny fiaraha-monina maharitra. Ny fenitry ny fahombiazan'ny ASI dia mamaritra ny fitsipika sy fenitra momba ny tontolo iainana, sosialy ary ny fitantanana hamahana ny olana maharitra amin'ny rojom-bidy aluminium. Izy ireo dia ekena amin'ny sehatra iraisam-pirenena ho fari-pahaizana ambony indrindra amin'ny fomba fitantanana ny tontolo iainana, sosialy ary orinasa mifandraika amin'ny rojom-bidin'ny aliminioma ary maharitra mandritra ny androm-piainan'ny famokarana aliminioma, ny fampiasana ary ny famerenana amin'ny laoniny. ny aluminium mba hahatratrarana ny tanjon'ny fampandrosoana maharitra ny aliminioma
Mba hampiharana ny fotokevitra fampandrosoana vaovao sy hampiroboroboana ny fivoarana avo lenta, ny New Aluminium Tech Co Ltd dia nampiditra fampandrosoana maitso sy maharitra ho an'ny paikadim-barotra fototra. Tamin'ny Mey 2019, niditra tao amin'ny ASI Organization ary lasa mpikambana ao amin'ny ASI Production and konversi Process Group. Nanomboka ny fametrahana ny rafitra fenitra ASI Performance sy ny rafitra fari-pitsipika mpanara-maso ASI izahay. Tamin'ny volana jolay tamin'ity taona 2020 ity, ny fikambanana International Aluminium Management Initiative Organisation dia nanao fanaraha-maso ny fenitra fampisehoana ASI teo aminay. Taorian'ny fanaraha-maso henjana, ny orinasa Zhejiang New Aluminium Technology Company dia nandany ny fanadihadiana an-toerana ny fenitry ny fampisehoana ASI tamin'ny farany